Ulibala njani ukuba ngubani omthandayo ▷ ➡️ Fumanisa kwi-Intanethi ▷ ➡️
Indlela yokulibala ukuba ngubani omthandayo. Sonke siye sathandana ngexesha elithile ebomini bethu. I-Adventures, ukuhleka, isidlo sakusihlwa, umsindo, ... Ukuphila ixesha elikhethekileyo kunye nomnye umntu kwaye ungafuni ukuba kungapheli, kodwa ngelishwa oku akusoloko kunjalo.
Nangona kuya kuba kuhle ukufumana umntu ofezekileyo ebomini, ayisoloko iphunyezwa. Nisenokungabi nanjongo zifanayo okanye ubomi benu bufanele bohlulwe. Kulapho kufika khona ingxaki enkulu, ungalibala njani ukuba uyamthanda?
Kweli nqaku siza kunika uluhlu lweengcebiso nceda ulibale uthando lwakudala nokuba ungaqhubela phambili, uyafuna ukuyifunda?
1 Indlela yokulibala ukuba ngubani omthandayo inyathelo ngenyathelo
1.1 1. Luqhawule unxibelelwano
1.2 2. Akunakuphepheka ukucinga ngomnye umntu
1.3 3. Cinga ngawe
1.4 4. Thetha nomntu omthembileyo
1.5 5. Fumana impefumlelo ngabantu aboyisileyo
1.6 6. Yiba nomonde kwiintlungu
1.7 7. Gxininisa kwixesha langoku
1.8 8. Khumbula iintsilelo zalowo wangaphambili
1.9 9. Tyala into oyithandayo
1.10 10. Musa ukuzigxeka
1.11 11. Yenza izangoma ukulibala ukuba ngubani omthandayo
1.12 12. Umthandazo
Indlela yokulibala ukuba ngubani omthandayo inyathelo ngenyathelo
Okulandelayo siza kukunika Iingcebiso ze12 ukuze ufezekise kwaye ufezekise injongo yakho yokulibala ukuba uyamthanda kwaye unokuqhubeka nobomi bakho.
1. Luqhawule unxibelelwano
Ingcebiso yokuqala esikunika yona malunga nendlela yokulibala ukuba ngubani omthandayo kukuqhawula unxibelelwano kunye ne-ex . Nokuba kusebusweni, kumajelo eendaba ezentlalo, okanye ngefowuni, ukuhlala unxibelelana emva kokwahlukana kuya kuphinda kuvule amanxeba akho. Abantu abaninzi bayalihoya eli nyathelo kwaye banokuphinda babuyele, babeke ecaleni ukuphiliswa kwabo ngokweemvakalelo ukuze bazuze umva wabo wangaphambili.
Ukuba awukwazi ukunqumla unxibelelwano, awuyi kulibala olu thando, nokuba ubudlelwane bubuhlungu. Kwakhona, kufuneka lahla izinto kunye nezipho ukuba wakunika ukuba uphephe ukucinga ngaye.
2. Akunakuphepheka ukucinga ngomnye umntu
Nangona kuvakala kubhidanisa, Okukhona uzama ukungamcingeli omnye umntu, kokukhona uya kucinga ngaye. Ngokutsho kweengcali zengqondo, xa sizama ukulibala malunga ne-ex, sifumana umphumo ochaseneyo. Sigxininisa ukucinga kwethu ekungayikhumbuli, ngoko sele ucinga ngaloo mntu.
Ungayinyanzeli, ayinakuphepheka ukuba ngamanye amaxesha loo maxesha ubukhe wafika engqondweni. Ngokulula Sukuba nexhala ngayo kwaye uqhubeke.
3. Cinga ngawe
Kukhangelo lokuqonda ukuba ungalibala njani ukuba ngubani omthandayo, unokuhlakulela umlutha ngenxa yoxinzelelo, ukudinwa kunye noxinzelelo. Ukujongana nazo zonke ezi zinto Iziphumo ezibi kufuneka uphumle kwaye uphumle. Kuya kufuneka uzazi iimfuno zakho ngeli xesha kwaye uzigubungele. Zithobise, unxibe kwaye uzame ukungatshoni kwisithukuthezi sakho, eUkuphela kobudlelwane yinguqu ebalulekileyo ekufuneka yenziwe ngempilo kunye nomonde .
4. Thetha nomntu omthembileyo
Ukukhulula umthwalo wakho ngomhlobo omthembileyo kunoko nceda umntu anqobe ukungakhuseleki kwakhe. Ukuthetha kunceda iintliziyo zethu, zikhuphe yonke into esinayo ngaphakathi kuze kube lula ukuqonda uxinezeleko namaxhala esiphila kuwo. Zama ukuqonda iimvakalelo zakho njalo jonga imeko ngenye imbono.
5. Fumana impefumlelo ngabantu aboyisileyo
Ukuphelisa ukwahlukana akuyondlwan’ iyanetha, yaye kusenokwenzeka ukuba uya kuba nengxaki yokukwenza oko. Indlela elungileyo yokubona ukuba oku kuqhawuka kunokoyiswa sikhuthazwe ngabantu esibathandayo nabakhe batyhubela kwiimeko ezifanayo. Ngale ndlela, sinokushukunyiswa kukuqonda indlela abaye bakoyisa ngayo ukwahlukana.
Unokufumana ezi zikhombisi kwi:
Iiwebhusayithi kunye neeblogi: Kukho amajelo adalwe ngokukodwa ukuba ababhalisi bafunde ukuba nobudlelwane obunempilo, kubandakanya nokupheliswa kwabo.
Iividiyo okanye ushicilelo kuthungelwano: Ukuba yindlela yonxibelelwano olukhawulezayo, siya kuhlala sinengcebiso evela kumntu malunga nendlela yokulibala ngomntu.
Iingcebiso ezisuka kubahlobo: Ukuba umhlobo osenyongweni uye wakwimeko efanayo, zama ukuthetha naye uze ukhuthazwe lutshintsho alwenzileyo.
6. Yiba nomonde kwiintlungu
Nangona kubonakala kungenakwenzeka, Uya kudlula kwintlungu oyivayo ngokwahlukana. Oku kufuna ukuba uhloniphe intlungu yakho kwaye uphile le nkqubo yokwahlukana ngokuzolileyo. Njengoko uzama ukuphelisa intlungu yokwahlukana nomntu omthandayo, yenza izinto eziyonwabisayo uze ufune inkxaso yabona bahlobo bakho basondeleyo.
Kwakhona, musa ukuzithelekisa nomntu okwazileyo ukuphelisa ukwahlukana ngokukhawuleza. Nika ingqondo yakho ixesha lokujonga oku kwahlulwa ngendlela ekhulileyo nenoxanduva.
7. Gxininisa kwixesha langoku
Ingcebiso yesixhenxe malunga nendlela yokulibala ukuba ngubani omthandayo musani ukucinga ngekamva kunye okanye ubambelele kwixesha elidlulileyo. Impazamo eqhelekileyo kukuba nomfanekiso-ngqondweni wokwenyani ongenakwenzeka endaweni yokugxila kwixesha langoku kunye nokuvuthwa kwayo. Ukongezelela, kuyimfuneko ukuqonda izizathu zokuba kutheni nahlukana, ukuhlalutya nokukhumbula ukuba imeko yayingalunganga kwaye akukho namnye kuni owayelungile.
8. Khumbula iintsilelo zalowo wangaphambili
Xa sisohlukana nomntu sinomkhwa wokukhumbula okuhle kuphela, kodwa khumbula ukuba ukuba ukushiyile, kungenxa yokuba yonke into yayingemnandi kangako. Zama uku cinga ngeentsilelo zabo nezimo zabo zengqondo ezingakhiyo ukuze baphephe ukuphinda babuyele emva okanye khawucinge ngobudlelwane obugqibeleleyo. Konke oku akuthethi ukuba kufuneka uyithiye, kude nayo, kodwa ayithethi ukuba unayo esibingelelweni.
9. Tyala into oyithandayo
Ngethuba nje intliziyo yakho iphilisa, unako gcina ingqondo yakho igxile kwimisebenzi oyithandayo. Ungabuyela kwimisebenzi yakudala obuyithandayo okanye ufumane emitsha ekwenza wonwabe. Ukongeza kwimvakalelo yokufezekiswa, ngale ndlela uya kuqalisa ukuba neenkqubo kunye nezinto zokuzonwabisa ezingayi kubandakanyeka kuyo ex yakho.
10. Musa ukuzigxeka
Impazamo eqhelekileyo kukucinga ukuba ukwahlukana kulityala lakho kuphela. Sukuziva unetyala Ukucinga ukuba awukhange ufikelele kulo msebenzi, singabantu abaneziphene zendalo kunye namabhongo kwaye, ke, sityekele ekwenzeni iimpazamo. Kwakhona, ukungahambelani kubudlelwane kunokugxotha abantu.
Ngoko khumbula ukuba nobabini nigqibe ekubeni nithathe esi sigqibo nokuba, nangona kubuhlungu, kwixesha elizayo uya kubona ukuba ibe yeyona nto ilungileyo onokuyenza.
11. Yenza izangoma ukulibala ukuba ngubani omthandayo
Kwiphulo lokuphelisa ukwahlukana, abanye abantu baye babhenele ekuthakatheni ukuze balibale ngomntu othile. Okulandelayo, siza kukunika umzekelo onokuthi uwenze:
Bhala igama elipheleleyo lomntu ofuna ukumlibala ephepheni elimhlophe.
Liphose emanzini elo phepha uze uphindaphinde eli binzana izihlandlo ezithathu: “Emagopheni alo mlambo, ingqushu iyama. Ubufana nesigodo ebomini bam. Kumsinga wobomi, ngoku udlulile.
Ukwenza olu qheliselo kufuneka ube nokholo lokuba luya kusebenza. Yi umthambo wengqondo okunceda ukuba umlibale lo mntu, ngaphezu kopelo kwaye unexabiso elingumfuziselo lokoyisa nokulibala.
Ukongeza kwimilingo, abantu abaninzi baphendukela emthandazweni ukuze balibale olo thando lulahlekileyo. Ngamafutshane, lolunye uqheliselo lwengqondo ukususa uthando lwangaphambili ebomini bakho. Ngamanye amazwi, kukucamngca ukukhupha intlungu oyivayo ngelixa ujongene neemvakalelo kunye nobomi bemihla ngemihla.
Nangona kunokuba nzima, ukucinga indlela yokulibala ukuba ngubani omthandayo kuya kuba luncedo kuwe. Ngoku lixesha lokunxibelelana nathi kwaye simamele iminqweno yethu. Ngengqondo ecacileyo siyakwazi ukuzicebisa kwaye siqole njengabantu.
Siyathemba ukuba eli nqaku ukusuka fumanisa.online ikuncede yaye, ukuba ukule meko, khumbula ukuba oku kubandezeleka kuya kuphela. Kwiintsuku ezimbalwa zokuqala emva kokuhlukana kuya kuba nzima, kodwa ngokukhawuleza uya kufumana into oyifunayo ukuze ufumane umntu.
Indlela yokuba krelekrele